Izincomo zethu ezizwakalayo zalolu Lwesihlanu Olumnyama 2019 | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | | Amazon, Imicimbi, General
I-Black Friday yalo nyaka i-2019 isiseduze, kepha-ke, okunikezwayo kufika njalo ngaphambi kokunikeza izaphulelo ezinhle kumikhiqizo ebesikade siyibhekabheka isikhathi eside. Njengoba Kulo nyaka kwa-Actualidad Gadget sifuna ukukusiza kakhulu kunakuqala, esizokwenzela ukuhlanganisa okuncane kokunikezwa komsindo okuhle kakhulu esinakho, lapho uzothola khona ama-headphone, izipikha ezihlakaniphile kanye nokuncane kwakho konke. Thola nathi okuyizinhlinzeko ezithakazelisa kakhulu ngomsindo wale Lwesihlanu Lumnyama futhi uthathe ithuba lokuvuselela imikhiqizo yakho ngentengo engcono kakhulu.
1 I-Kygo A11 / 800 - Amahedfoni ane-ANC
2 I-Sonos Move - Isipikha esizungeza konke
3 Isipikha Esihlakaniphile Sivuke - Iwashi le-Alamu eline-Alexa
4 Amahedifoni wokusebenza nokuzihlanganisayo
5 Ama-headphone we-True True (TWS)
I-Kygo A11 / 800 - Amahedfoni ane-ANC
Siqale ngomkhiqizo owanda ngokwandayo, ama-headphone akhansela umsindo. Sibe nentokozo yokuhlola le Kygo A11 / 800 emasontweni ambalwa edlule. Ekuhlaziyweni kwethu sithole inani elihle kakhulu lemali uma kukhulunywa ngomkhiqizo, Sinokuzimela okuhle kakhulu kumahedfoni akhokhiswa ngokuxhumeka kwe-USB-C futhi anecala lokuphatha elifakiwe ebhokisini, naphezu kwalokhu agoqeka ngokuphelele, ngakho-ke athatha isikhala esincane lapho sifuna ukuwagcina khona. Sinephaneli yokuthinta yokulawula i-multimedia kanye noxhumano lwe-3,5mm jack lomsindo we-analog.
Thenga iKygo A11 / 800
Ubuchwepheshe be-Bluetooth inguqulo 5.0 kungenzeka kanjani ukuthi ibe ngenye indlela futhi ukumiswa kuzenzakalelayo ngokuphelele. NgoNovemba olandelayo olandelayo kuze kube nguNovemba 28 uqondana neBlack Friday, lawa ma-headphone azoba nesaphulelo se- I-50% esitolo esisemthethweni seKygo, ukuze bazohlala ku- € 150 kufakwe nemikhumbi, isaphulelo esinamandla sisebenzisa lezi zinsuku ezikhethekile. Khumbula ukuthi lawa ma-headphone angathengwa zombili ezimhlophe nezimnyama nokuthi inombhobho ophindwe kabili ukwazi ukuphendula izingcingo kalula.
I-Sonos Move - Isipikha esizungeza konke
ISonos Move iyisipika esikhethekile, isikhulumi sokuqala se-Bluetooth sefemu yaseSweden nayo enaso ezinye izici ze-Sonos, njenge: Ukuxhumana ne-Amazon Alexa ne-Google Assistant, i-Spotify Connect, i-AirPlay 2, ukumelana namanzi ... Kodwa-ke, yakhelwe futhi ukuthi ukwazi ukuyibeka ngokoqobo lapho uthanda khona, ngoba inembobo ye-USB-C kanye nesiteshi sokushaja esizosivumela ukuthi siyiyise lapho siyidinga khona, ihlale ihambisana namandla adingekayo nekhwalithi ezwakalayo, njengensimu yethu noma amaqembu ethu anesibindi.
Thenga iSonos Move ngama- € 339
Ngaphezu kwalokho, uSonos ulungiselele iqoqo lokunikezwa kweBlack Friday neCyber ​​Monday:
Okungaphansi € 699 -100 €, 699 €
Lesi sipikha sinosayizi ohlangene futhi sinesisindo esiqukethe uma kubhekwa amandla aso. Uma siyibeka esisekelweni sayo, iyiSonos yendabuko, kepha uma siyikhipha futhi siyixhuma ngeBluetooth sinesipika esingenamkhawulo. Ungabona ukuhlaziywa kwethu okujulile nevidiyo yethu uma ufuna ukuyazi kahle. Ifemu yaseSweden izoba nokuthengisa kwayo kwe-Black Friday kuwebhusayithi yayo ngaphezu kwezaphulelo esizithola ochungechungeni lwemikhiqizo yazo ethengiswa e-Amazon.
Isipikha Esihlakaniphile Sivuke - Iwashi le-Alamu eline-Alexa
Ungacabanga ukukwazi ukususa ishaja, iwashi le-alamu kanye nesipikha etafuleni lakho eliseceleni kombhede ku-swoop eyodwa? Konke lokho nokuningi kwe-Energy Sistem ikunikeza ngalesi Somlomo Esivumayo, isipikha esihlakaniphile esiwashi le-alamu futhi ngasikhathi sinye isisekelo sokushaja okungenazintambo esisezingeni le-Qi. Kepha inezinto eziningi ezisebenzayo, ungasebenzisa ubuchwepheshe bayo beBluetooth 5.0 noma izici zayo zeMultiroom ukuze ukwazi ukuyihlanganisa nayo yonke eminye imikhiqizo ebangeni. Ngendlela efanayo, sithola isipikha se-stereo esingu-2.0 esanele futhi esingaphezulu ukugcwalisa igumbi ngomculo sibonga i-Spotify Connect.
Thenga Isipikha Esihlakaniphile Vuka
Lesi sikhulumi siyatholakala ku-Amazon futhi kuwebhusayithi ye-Energy Sistem lapho benza khona izaphulelo ezinkulu zeBlack Friday kumikhiqizo ye-Smart Sepaker efana ne 5 Ikhaya futhi i Umbhoshongo, Akukaze kube buhlungu ukubheka ukubona ukuthi eminye yale mikhiqizo ehambisana ne-Alexa ingaba yingxenye yendlu yakho. Ngokwethembeka, ngale ntengo ingena esikhundleni semikhiqizo emincane evame ukuba setafuleni futhi izocishe ibaluleke kakhulu osukwini lwakho nosuku, ngoba iwashi le-alamu futhi izokukhumbuza njalo ekuseni ukuthi kufanele uye emsebenzini .
Amahedifoni wokusebenza nokuzihlanganisayo
Engikulethela khona manje iqoqo lamahedfoni wokugijima noma ezemidlalo ngokujwayelekile, Futhi ukuthi kulolu hlobo lomsebenzi nakanjani alifanele nganoma yiluphi uhlobo lwamahedfoni, njengoba kunengqondo, ngoba kuyadingeka ukuthi ngaphezu kokubamba kahle endlebeni banokumelana okuhle nokungajwayelekile kwalokhu uhlobo lomsebenzi. Ku-Actualidad Gadget sihlaziye, isibonelo, idlanzana lamahedfoni, ngakho-ke sikushiyela iqoqo elincane:
Isihlubuki sikaFresh'n unayo izaphulelo ezikhethekile kwa-El Corte Inglés
I-Energy Sistem Outdoor Box Street isuka ku- € 99,50
I-Ultimate Ears Boom 3, esinye sezipikha ezinhle kakhulu ezingenantambo emakethe ngesaphulelo esihle, ihlala ku- € 84,99
Ama-headphone we-True True (TWS)
Muva nje ama-headphone we-TWS angumkhiqizo wenkanyezi, ku-Actualidad Gadget sike sazama nenqwaba yalokhu. Ngifuna ukugqamisa kuqala Ama-TicPods Mahhala avela kwaMobvoi, ama-headphone ukuthi ngombala wabo omnyama angama-euro angu-71,12 kuphela okuyisaphulelo cishe esingu-50% kusuka enanini laso lokuqalisa. Angamahedfoni angenantambo ngokuphelele anokumelana ne-IPX5 nokulawulwa kokuthinta phakathi kokunye ukusebenza okuningi, bheka ukuhlaziywa kwethu uma ufuna ukubazi ngokujula okungaphezulu.
Nathi siyakushiya Ama-headphone we-TWS ukuthi sizamile muva nje nokuthi futhi sinezaphulelo, ziyathakazelisa uma unikezwa inani lazo.
I-Arbily G9: Izindlebe ze-Bluetooth 5.0 ezinokumelana nezithukuthuku, amahora angaphezu kwama-20 nebhokisi lokushaja, imakrofoni nokukhanselwa komsindo, Ayikho imikhiqizo etholakele.
Yebo, lokhu bekuyiqoqo lethu lezipikha ezincane namahedifoni ku-Actualidad Gadget yalolu Lwesihlanu olumnyama, sincoma ukuthi uhlale uqaphile ngoba izaphulelo ezithandekayo zizofika futhi sizohlala sizishicilela, isonto likaBlack Friday selifikile kufanele ukusizakale. Uma wazi ukunikezwa okuningi noma unemibuzo, zisebenzise ebhokisini lamazwana bese ujoyina isiteshi sethu se-YouTube, bese ulandela thina kuqhubeke Twitter uma ufuna ukwaziswa ngezindaba ezinhle kakhulu emkhakheni wezobuchwepheshe, kanye nokuhlaziywa kwakamuva kwazo zonke izinhlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Amazon » Izincomo zethu ezizwakalayo zalolu Lwesihlanu Olumnyama 2019
Sixoxa noFabián Gumucio, inhloko kaRakuten Kobo eSpain